Top 3 Free Photo siladda - The Best Photo arkaysid Software
> Resource > Free > Top 3 Free Photo Daawadayaasha for Windows
Siladda sawir default yimaada pre-rakibay nidaamka Windows kuma filna? Kumanaan sawiro in uu abaabulo aad disk? Waxaa jira dhowr ah oo aad u fiican oo bilaash ah sawir kale oo siladda in Windows siladda default sawir. Maqaalkani waxa uu ku bari doonaa 3 daawadayaasha sawir oo lacag la'aan ah in la jaanqaadaan nidaamka Windows. Eeg oo mid ka mid ah aad u baahan tahay dooran.
Free Photo siladda 1: siladda Image FastStone
Siladda Image FastStone waa software user-friendly, oo deggan iyo siladda degdeg ah image ah, taas oo ay taageertaa oo dhan qaabab graphic weyn oo ay ka mid yihiin BMP, jpeg, jpeg 2000, GIF, PNG, PCX, TIFF, WMF, ICO, TGA iyo qaar ka mid ah noocyada kale file cayriin. FastStone Image siladda bixisaa fiican aragtida shaashad buuxda oo size thumbnail caadadii (database suulka sawirada for dhirta si dhakhso ah sida siladda sawir ganacsi ACD eeg). Plus, ayaa sahamisa file, Favorites iyo qalab Tag caawiyo in aad si fudud u dhirtuba images oo ay leeyihiin waayo-aragnimo la daawado image ugu fiican.
Free Photo siladda 2: XnView
XnView waxaa loo tixgeliyaa sida loo dhan-in-siladda mid image, browser iyo Converter goobta publisher ee. Waxa ay taageertaa qaababkan soo image ugu - 400 dejinta & 50 dhoofinta. XnView si fiican u arki kartaa, sort, browser iyo diinta oo dhan sanamyadiinna. Waxay awood u khasnado thumbnail la daawado dhakhso image, laakiin weli si degdeg ah oo aan khasnado. Plus, waxay ku siinaysaa fursado si ay u xaalkaa sawir la editor sawir dibadda sida Photoshop, in Dufcaddii processing images, si ay u abuuraan image slide show, oo taas sii dheer oo kale.
Free Photo siladda 3: IrfanView
IrfanView waa siladda ah sawir aad u yar, is haysta oo si degdeg ah iyada oo taageero qaab file cajiib ah. Waxaa dhab ahaan u qaybsameysaa Image siladda iyo Thumbnail Browser ah. Siladda image waa heer sare customizable. Marka aad tahay qof aqoon leh interface ka, aad ku raaxaysan doonaa waayo-aragnimo sahamisa sawir fiican ee la. Ogsoonow in toolbar Google iyo Desktop Search xidhaba waxaa lagu guraa, uncheck doorashada haddii aadan marka rakibidda.
Fiiro gaar ah : Haddii aad heshay badan oo sawiro, waxaad isticmaali kartaa Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe inuu ka soo leexdo sawiro iyo videos in filimada Hollywood-style iyo wadaagaan internetka ay ka mid yihiin YouTube, Facebook. Waxa kale oo aad ku gubi karaa moives si aad u DVD iyo daawadaan TV-ga iyo Qalabka telefoonada gacanta oo caan ah sida iPod / iPhone / iPad, PSP, telefoonada Android, iwm Waxaa aad video heerka soo socda ku soo dejin doonaa, oo yaabiyo saaxiibo.